चाणक्य नीतिमा असल नेता बन्न चाहिने गुण के के छन् ? - Narayanionline.com Narayanionline.com चाणक्य नीतिमा असल नेता बन्न चाहिने गुण के के छन् ? - Narayanionline.com
चाणक्य नीतिमा असल नेता बन्न चाहिने गुण के के छन् ?
आचार्य चाणक्यले कुशल नेतृत्वका लागि धेरै कुराहरू बताएका छन् । उनलाई विष्णुगुप्त र कौटिल्यको नामबाट पनि चिन्ने गरिन्छ ।
सताब्दीऔं पुरानो भएपनि चाणक्यको नीतिलाई वर्तमान समयमा पनि उत्तिकै प्रासंगिक मानिन्छ । चाणक्यले जिन्दगीमा सफलता प्राप्त गर्न धेरै नीतिहरू बनाएका थिए ।
चाणक्यका अनुसार एक सफल नेता बन्नका लागि आफ्नो गल्तीहरूबाट सधैं सिक्नुपर्छ । यदि आफ्नो गल्तीबाट सिक्ने समय छैन भने अरूले गरेको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ । यसो गर्नाले कोही पनि व्यक्ति छिटै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ।
उनका अनुसार कुनै पनि नेतृत्वकर्ता धेरै इमान्दार हुनु हुँदैन । सबैभन्दा पहिला सिधा उभिएको रुख काटिन्छ भन्दै उनी भन्छन्, ‘यही कारण इमान्दार भएर मात्र पुग्दैन, सतर्क पनि रहनुपर्छ ।’ उनका अनुसार एउटा राम्रो नेता बन्न कर्मको सिद्धान्तलाई पछ्याउनुपर्छ । चाणक्यले धर्मशास्त्रलाई महत्वपूर्ण मानेका छन् । उनका अनुसार कर्म सिद्धान्तलाई कहिले पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । मान्छेको भाग्यको फैसला उनीहरूको कर्मका आधारमा हुन्छ । उनका अनुसार गलत कामको परिणाम सधैं गलत नै हुन्छ ।
एक सफल लिडरको सफलता उसको गोपनीयतामा निर्भर हुन्छ । चाणक्यका अनुसार एक महान नेताले आफ्नो सबै कुराहरू कसैलाई बताउनु हुँदैन । आफ्नो जीवनमा अघि बढ्न बनाइएका कतिपय योजनाहरू कसैलाई बताउनु हुँदैन । एउटा राम्रो नेताले आफ्नो शत्रुबाट पनि केही सिक्नुपर्ने कुरा भए सिक्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोरोनाले मनकामना मन्दिर प्रवेशमा रोक